Wednesday, April 20, 2022 Monday, April 25, 2022 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị nwebeghị ohere idezi vidiyo, ị na-abụkarị maka usoro mmụta dị elu. Enwere sọftụwia bụ isi ebe ahụ iji ewepụtụ, mezie ma gbakwunye mgbanwe tupu ebugo vidiyo gị na YouTube ma ọ bụ saịtị mgbasa ozi… ma mgbe ahụ enwere nyiwe ụlọ ọrụ wuru maka gụnyere ihe nkiri, mmetụta na-adọrọ adọrọ, na imekọ vidiyo dị ogologo. N'ihi mkpa bandwidth na mgbakọ na mwepụ, idezi vidiyo ka bụ usoro ejiri desktọpụ rụzuo ya na mpaghara
Ebe ị ga-enye iwu Eco-Friendly, nkwakọ ngwaahịa na-adịgide adịgide maka ngwaahịa Ecommerce gị
Ọ dị obere ka otu izu na-agafe na anaghị m enweta ụdị nnyefe n'ụlọ m. Enwere m ndụ ọrụ n'aka nke ukwuu yabụ na ịdịmma nke ịnweta nnyefe Amazon Key nke ihe ma ọ bụ ngwa ahịa n'ime ebe a na-adọba ụgbọala siri ike gafere. Nke ahụ kwuru, amaara m nke ọma na enwere ọtụtụ ihe mkpofu metụtara omume m. Otu ihe na-adọrọ mmasị bụ na mgbe a na-ewere igwe mkpọgharị m